NAB Ratidza Nhau ne Broadcast Beat. Mutasviki wezveNhepfenyuro weNAB Kuratidza, Mugadziri weNAB Ratidza LIVE - Peji 853 - NAB Ratidza Nhau: Broadcast Engineering, TV & Radio Technology uye Post Production News. Murimi weNAB Ratidza LIVE
PaZvino Kuita Mubatsiri
Kubva kuBrooklyn Chiitiko nekugadzirwa kwekambani kutsvaga vanhu vatsva pachigaro chekuzvipira mukutonhora / yechando che2013. Vadzidzi vakanaka vanofanira kunge vane: - Mafungiro asina kunaka-Maitiro akazara e-aesthetics & unyanzvi hwakanaka-Chido chakasimba chekushandira (mutambi wechikwata) -Pfungwa yekushanda munzvimbo yakasikwa uye ine simba. Iyi nzvimbo ndeyomumwe munhu ane sarudzo yakanaka yekushanda site panzvimbo yekugadzirisa & kuparara, kunyanya munguva yekutengesa nguva. Munhu akafanirwa anofanira kunge akakwanisa kugadzirisa, kudzidza uye kuramba akaisa pfungwa mumhepo inokurumidza kufamba. Unyanzvi hunosanganisira: -Installation and breakdown of scenic elements -Lifting, loading and unloading trucks (heavy and otherwise) -Packing ...
Mutungamiriri, Production Safety
-Overses kutevera mitemo yeEHS yehurumende, yehurumende nemunharaunda uye zvinoda, kusanganisira kuziva nekuwana zvibvumirano zvose zveEHS nemvumo -Inoshandisa, inovandudza uye inoshandisa zvirongwa zveEHS nemitemo, kusanganisira Zvigadzirwa Zvekuchengetedzwa Kwekuchengetedza (Kukuvadza uye Kurwara Zvidziviriro Zvirongwa) Kudzora Kudzora, Ropa Rinoita Pathogen Zvirongwa, Kuchengetedzwa Kwemhepo, Kuvhara Kudzivirira, Zvimwe Zvokuchengetedza Zvimwe Zvimwe Zvimwe Zvimwe Zvimwe, Zvidzidzo Zvekuchengetedzwa Kwekuchengeteka uye Kudzidziswa, Kudzivirira Kuvhara nekutsvaga nekukuvadza nekupa ruzivo-Kunoita uye kunotungamirira kudzidzisa kweEHS kuzvinhu zvinowanikwa uye mapoka ekubatanidza mukati-Kubva pakuongorora script / creative treatments uye zvimwe zvekugadzirisa zvigadzirwa zvekugadzira, uye kuenderera mberi kukurukurirana nevashandi vekugadzira, kugadzira, kutungamirira, uye kugadzirisa zvirongwa zvekuchengetedzwa kweprojekti-Tsvakurudzo, ...
Post Post Production Murayiridzi
1. Dzidzisa vadzidzi kuti vashandise Final Cut Pro uye Adobe Premiere nekugadzirisa nyaya.2. Rayira vadzidzi mukushandiswa kweApt Effects uye Adobe CS5 yekugadziridza mavara uye zvisikwa zvinooneka.3. Dzidzisa vadzidzi kuti vashandise sei DaVinci Resolve pakururamiswa kwemavara.4. Taurai mazano makuru ekururamisa mavara, uyewo zvidzidzo pakutevera, mafasita emagetsi uye kushandiswa kwemavara.5. Dzidzisa vadzidzi kuti vashandise sei RED CINE-X kururamisa mavara.6. Raira vadzidzi mumabasa akanaka ekufambisa kwemapurisa anobva ku16mm, 35mm, HDSLR, uye RED kamera.7. Tsanangura tsanangudzo dzinoenderana nekunyora kwevhidhiyo uye mafomu.1. Yakadzidza ruzivo ruzivo rwemuvara ...
Post Engine Engine
Kuwedzera kambani yemavhidhiyo iri kutsvaga vhidhiyo injini yekudzidzira kukura kwedu post post production infrastructure. Iyi nzvimbo inoda kutaurirana nevashandi vekugadzirwa kwemashure, kuongorora nyaya, kushushikana, uye kutarisa nyaya dzevhidhiyo. Anofanira kunge ane ruzivo nemavhidhiyo post post production network uye server kushandiswa. Tungamira mabasa ekuparidzirwa kwemashure ekugadzirwa kwemashoko mukugadzirira, kukura, kushandiswa kwebasaflows uye hardware. Chengetedza kukwanisa kupa zvinyorwa, rubatsiro, nekugadzirisa kwekambani yenhepfenyuro yekutaurirana neNLE infrastructure. Munhu anokwanisa kunge ane ruzivo rwakawanda rwePost Production workflows. Vanofanira kunge vane ruzivo rwekare pane imwe nzvimbo yekugadzira chigadzirwa, kana chikwata chetape.
Post Production Yakagadziriswa Coordinator inoda kuwedzera kambani yekugadzira, ine mishonga yakawanda iye zvino inodhonza. Munhu ari mubasa iri achabatanidza hurukuro yakawanda yekuendesa, kuronga zvirongwa, uye kutarisira vatapi venhau uye PAs. Kutsvaga mumwe munhu anonyatsocherechedza tsanangudzo, anozvikurudzira, anoda chaizvo kudzidza uye kugovera kune boka guru. Muongorori achave ari kutarisana nemakwikwi makuru akaita se AMC, Vh1, Spike, HIST, Discover, Bravo, A & E, uyewo kushanda neInternating Casting and Development departments.
Mupiki Wemubatsiri - Chikamu Nguva
Mubatsiri wekugadzira Mutungamiri basa inzvimbo inoshuva yekusika, inoda hutungamiri nehutano hwekunamatira. I APD inoshanda neMuDhigiridzi weDzidziso uye inobatsira, pakati pezvimwe zvinhu, kugadzirwa kwekutengesa. Basa iri rinogona kutora kunyora, kubvongodza, kutaura, kuchengetedza zvinyorwa zvekuchengetedza, uye pamusoro pe-air kuzivisa uye kuita bhizimisi mabasa. Tsanangudzo yeJobho: Kubatsira muhutungamiri hwekutengesa vashandi uye basa rekushandisaIbasa neAEs nevatengi kuti vaumbe mavara ezvinyorwa.Conhete nevatengi pamusoro pekugadziraWanyora, kubudisa, uye kutengeserana kwemazwiVerenga kana ad-lib kuziva nzvimbo, kuisa uye kuswedera pedyo, uye kuzivisa chiremba kuputsaSwedera pedyo nemotokari nekuenderera kusimbisa mhando dzose dzekutengesa mhepo zvakaruramaMonitor ...
Sr Director, Production Finance position inotungamirira mukuumba sangano rose rezvemari rehurumende nemitemo sezvazviri maererano nekutengeswa kweimba. Izvi zvinosanganisira kuburikidza nekugadzirisa uye kutarisa maitiro emabhizimisi akaenzana uye kuswedera sezvo ichienderana nekugadzirisa kubuda uye mukati mekutonga; iyo nzvimbo ichavawo iyo yekuita nekugadzirisa nekuchengetedza matanho emabhadharo pane yese yekambani s scripted in-house zvibereko kweawa imwe nehafu yeawa. Mukuwedzera, chigaro ichi chichagadzirisa zuva rega rega Production Production mabasa e tbs neTTT. Izvi zvinosanganisira scripted in-house, chikwata chinogadzirwa. Main reponctions inosanganisira kugadzirira kuratidza ...
Clear Channel Springfield MO iri kutsvaga munhu mumwe chete anozvidzivirira kuti atungamirire dare redu rekutengesa rekutengeserana reDhipatimendi seMutungamiri wekugadzira iyo inogadzira; designs; uye inopinda mumba-mukutengeserana kwekutengeserana, kutora zvinotengeswa kubva kune pfungwa kusvika pakupedzisira. Ita mukati meimba maitiro ekutengeserana kusanganisira kurekodi, kutaurirana, kusanganisa, kubvongodza nekuchengetedza zvinyorwa. Ita basa rekutengeserana kubatsira vashandi. Kutsigira kwekusika kune dhipatimendi rekutengesa maererano nekutengeserana kwekutengeserana kusanganisira kukopa kopi yekunyora sekudiwa. Teerera uye kururamisa misikanano yezvokutengeserana zuva nezuva. Kushandiswa kwemajeri audio audio.Kushanda pamwe nemotokari nekuenderera mberi kusimbisa mhando dzose dzekutengesa mhepo zvakaruramaAssist mukuona kusisina ripoti manheru ...
Musiki Diary Media Group, ikambani yekuzvimiririra ikambani, iri kutarisa kuhaya Muumbi weChigadziro kune imwe sangano rega rega, kupfura December 12th kusvika 16th. Iyo firimu yakareba / yeruzhinji firimu (9 maminitsi). Tichazouraya zvachose pane chinyorwa chemavara. Munhu akakodzera aizowana ruzivo rwezvido zvinoumbwa nezvinoonekwa uye nekushanda neVFX Supervisor. Tiri kutsvaga mweya wekusika uye yakagadzirirwa kugadzira / chiitiko chekuvaka. Kana iwe wakashanda nezvidhori-izvo zvinowedzera.
ZVOKUDZIDZA KUTAURA ARTIST
-Kugadzirira kweGwaro-Kuita sekubatanidza nevatori nevanyori neboka rekugadzira-Kutengeserana kwehupupuriro hwemagetsi-Peji yakarongeka (kusanganisira chati / grafu uye zvisikwa zvepafura) -Rega kopi yekugadzirisa-Dhidhiyo faira kugadzirira kwemahofisi ekudhinda uye digital diglishing-Kutonga kwakasiyana-siyana mabasa ane chokuita nekwereti uye kodzero dzekodzero-1-2 makore ekugadzirwa / maikirwo anowanikwa-Adobe CS6 nekusimbiswa kweInDesign-Acrobat Pro-Microsoft Word-Yakakosha mukushandiswa kweMac-Kuzviratidza kune unyanzvi hwekombiyuta yakafanana neXML a plus-QuarkXPress ruzivo a plus-College degree inoda
Urongwa urwu hwemabasa nemitoro haisi yakakwana. Kuwedzerwa, deletions, kana kuchinja kunogona kuitwa chero nguva. Muenzaniso wezviito Zvakaitwa: 1.Directly kutarisira uye kutarisira kuparadzirwa kwevanjiniya vekuchengetedza, vatungamiri vehutori uye vatinisi vemateereri, uye vashandi vanotsigira zvivako zvedu zvekugadzira uye zvekushanda. 2.Oversee studio, kutumira, kuvaka plant engineering, uye zvirongwa zvekuchengetedza. 3.Inosimbisa hutsika hwepamusoro yehutano hwemahofisi ose emakambani ehurumende kuburikidza nekutarisira matanho ose akakodzera. 4.Supervise yekugadzirisa uye kugadziriswa kweterevhizheni kuparidzirwa, IT, nezvimwe zvinoshandiswa. Ichaita semushandi wepurogiramu pazvivako zvakakura. Uyewo anoita maoko pamusoro pekugadzirisa nekuchengetedza zvishandiso sezvinodiwa. 5.Assists mu ...
Mupiki Wemubatsiri achabatsira munharaunda yese yekugadzirwa kwekusika. Itai, verengai uye munyore yevhidhiyo yevhidhiyo yeNBA Digital. Ita unyanzvi hwekunyora hwekunyora kwekuparidzirwa nekukwidziridza. Dzidza mushure mekugadzirwa kwezvinhu zvakakosha: kugadzirisa, sarudzo yakanaka uye inoonekwa.
Mupiro Wakavabatsira- TV Sports
MHURI: - Rega mitambo / mabvunzurudzo - Gadzira magwaro eTalente neVatungamiriri - Unganidza ruzivo rwe chyron - Tsanangudzo dzekutsvakurudza uye nyaya dziri paIndaneti - Kubatsira nemifananidzo uye zvichengetedze - Kurongedza, kuunganidza & kuisa mashoko ekugadzira mitambo - Coordinate, kuumba nekugadzira kushanyira humwe hukuru hunokosha - Ita mamwe mabasa nemabasa sezvaunenge wapiwa - Mupiro wenyaya nharo - Hurukuro nevatambi nevatsvedzi QUALIFICATIONS / ZVINOKUDZIDZISWA NEZVINHU ZVINOKOSHA: - BS kana kuti BA inyanzvi muNyanzvi dzinosarudzwa kana kuti zvakaenzana nebasa rekushanda - Chiitiko chechina (1) chiitiko mune zveterevhizheni basa , nekamuri remashoko rakasarudzwa - ruzivo rwakakwana rwe, ...
Ra Radio Production Assistant iyo inonyanya kushanda iyo huru studio board uye inoshanda nevashandisi vezvigadzirwa zvekugadzira nekugadzira mharidzo yemitambo yedu yekutambira mitambo. ESPN, Inc., Mutungamiri Wenyika Yose muMutambo, ndiye mutungamiri wenyika yose, wevemutambo wekudhirozesa wemitambo yemu multimedia ane ruzivo rwakanyanya kwazvo rwemitambo yemitambo ye multimedia nemasangano emabhizimisi anopfuura 50. Dzimba dziri muBristol, Connecticut, ESPN ndeye 80% inowanikwa naAbc, Inc. (imwe sangano reThe Walt Disney Company), uye 20% neCentral Corporation. ESPN yakatangwa naBill Rasmussen uye yakatanga musi waSeptember 7, 1979. Iye zvino vane vanopfuura 6,500, gore negore ESPN ...
Basa Guru: - Chengetedza Kuongororwa Kwekugadzira - Kuvaka Kugadzira Tubs (semabhanki, Dheet Graphics Drives, Mic Flags, Music Zip Disks, EVS Reels, Sales Element Reels, TD Element Reels, Tape Stock, X-Files, etc.) - Kubatsira ne ratidza zvinogona kuwanikwa (eg Bhobhobhodhi, Ratidza Zviratidzo / Zvimwe, kusanganisira Onion yeGurisa Open, Buttons / Stamps, Bugs To Break, Transitions, Replay Wipes, Team uye Player Frontends, nezvimwewo & CBS Insert Graphics Package) - Itai kuti mimwe mimhanzi, mifananidzo uye vhidhiyo inogadziriswa kumhepo - Iva nechokwadi kuti zvose zvinokonzerwa neHIV zvinokonzerwa nemafungiro zvinosangana - Chengetedza mapepa ekugadzirwa (eg kuzadziswa kweMapepanhau ekubudiswa, Music Cue Sheets, etc.) - Shanda ...
- Gadzirai piyona uye maitiro emabhadharo emishandirapamwe yakagadzirirwa - Chengetedza majeti emabhadharo - Gadzirira gwaro rega rega Mari Inoshandiswa Mharidzo yezvikamu zvakagoverwa - Gadzirisa zuva nezuva kubudisa maitiro ekugadzirisa maitiro ekugoverwa kwaunopiwa, kusanganisira: - Kubvumira kushandiswa kudarika mitemo yepamutemo - Ongorora uye kubvumira vhiki shomanana mari yekuyananisa - Kubatsira pakugadzirisa prep uye kuvhara mabhuku - Kuwana uye kubhadhara mazvikokota ekugadzirwa kwezvipfeko - Ongorora uye kuvandudza Mapeji ekuGadzira kweAkwereti uye Maitiro - Kurongedza kuongorora kwepakati pezvakagadzirwa zvekutengeswa - Chengetedza zvikwereti zveInishuwarenzi - Kuronga nekugadzirisa hurongwa hwekugadzirisa michina - Kupa rubatsiro rwemari kuZvirongwa Vatariri - Coordinate mazwi emari e ...
CHIKAMU CHOKUDZISA DIRECTOR WXRT / Chicago (Adult Alternative). Kutsvaga munhu akakurudzirwa zvikuru anokwanisa kutora nzvimbo iyi yepamusoro kusvika kune-yepamusoro-soro.- Yakarongeka zvakasiyana-siyana mumamiriro ezvinhu anobatanidza nemabasa anosanganisira: mapurogiramu chaiwo, mapikicha ekufungidzira uye zvinhu zvepurogiramu dzekunyora kweXRT, kuumba mavhesi evhiki nevanotumira manzwi , kutaura uye kunyora zvinyorwa zvekunyoresa, uye kugadzira kubudiswa nekukanganiswa kwehuwandu hwekushanda kweCSD digital applications.Kubvunzwa Qualifications Inofanira kunge yakanyatsozivikanwa muApp / Mac makombiyuta, ProTools platform, Adobe Audition, AudioVault (zvose zvinobva AV AV uye file management), ISDN, FTP teknolojia, uye PR & E Broadcast Mixer consoles. ...
-Kubata mabasa-Kubatsira pakudzika zvinhu zvakasimudzirwa-Kubatsira mumba-mutungamiri (kukanda, mapurisa emafungiro, maonero anoonekwa) -Shoot kubatanidza (nzvimbo, kutakurwa, unyanzvi, zvigadzirwa) -Kutsvaga nekuongorora mabhodhi & script-Intern zvinofanira kuwanikwa hutatu hwemazuva matatu / vhiki, 9: 30 AM - 5 PM. Vadzidzi vanokurudzirwa kuti vawanikwe kwemazuva matatu anotevera (eg: Mon, Tues, Wed) -Indistence pamusoro pehutano hwebasa & kunzwisisa mukati mekugadzirisa unyanzvi-Chido chekurumidza kupindura nekusimudzirwa-Teerera kuburikidza nekukwanisa kuregererwa
Page 853 pamusoro 857" Chekutanga...830840850«851852853854855»...Last »
Hey Buddy !, Ndakawana ruzivo urwu kwauri: "Kudhanha Fox Productions Tours Ireland neJVC GY-LS300 4KCAM kuShoko Rokunyora". Heino chibvumirano chewebsite: https://www.broadcastbeat.com/dancing-fox-productions-tours-ireland-with-jvc-gy-ls300-4kcam-to-shoot-documentary/. Ndatenda.